Duulimaadkii Turkish Airline Ee Muqdisho Oo Baaqday – idalenews.com
Duulimaadkii Shirkada Diyaarada Turkish Airline oo todobaadkiiba saddex jeer Muqdisho ku timaada ayaa saakay baaqday, iyadoo rakaabkii diyaarada ka raaci lahaa ay dib u dhac ku yimaadeen, kuwaasoo markii ay tageen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde lagu wargeliyay in aanay maanta imaaneyn.
Inkastoo magaalada Muqdisho saaka tahay mid inteeda badan xaniban, ayaa hadana waxaa la leeyahay in dib u dhaca diyaarada Turkish Airlines waxaa sabab u ah arrimo ammaan, kadib markii hey’adaha ammaanka dowladda ay saacadihii u dambeeyay heegan buuxa geliyeen magaalada oo dhan.
Diyaarada Turkish Airlines ayaa ah diyaarada kaliya ee caalami oo duulimaad rasmi ah ku timaada magaalada Muqdisho, taasoo si toos ah Ankara iyo Muqdisho duulimaad ugu sameyso, waxaana ka faa’ideysta dad fara badan oo qurbaha ka yimaada.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dadkii saaka diyaarada ka soo qaadi laheyd magaalada Ankara uu ku jiray Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari iyo wfadi uu hogaaminayay oo booqasho ku jooga Turkiga, kuwaasoo dib u dhac ku yimid dib ugu soo laabashadooda Muqdisho.
Diyaarada Turkish Airlines ayaa duulimaad ku timaada Muqdisho maalmaha Axada, Arbacada iyo Jimcaha, iyadoo baahi jirta awgeed todobaadkii saddex jeer looga dhigay, kadib markii horay u aheyd labo maalmood todobaadkiiba.
Howlaha garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa ah mid caadi ah, iyadoo saaka diyaaradaha rakaabka ee ka imaanayay Gobolada iyo dalalka deriska ay soo caga dhigteen garoonka, mana jirto wax saameyn ah uu ku yeeshay howl galada socda iyo wadooyinka xiran.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maalintii labaad si aad ah loo adkeeyay, iyadoo ay xiran yihiin dhamaan wadooyinka muhiimka ah oo ay ku jirto wadada aada garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ay adag tahay in gaadiid aan aheyn kuwa dowladda uu galo.
Akhriso:- Maamulka Puntland oo soo Bandhigay Qodobadii Dastuurka laga saaray